फोहोर दाँतको समाधान | KTM Khabar
२०७४ असोज २८ गते १०:०९ मा प्रकाशित
ऐनाको सहायताले दन्त लेउ, (Plaque, Debris) दागहरु (Stains) वा (Calculus) जमेको फोहोर के हो जाँच्नुहोस्प/त्तालगाउनुहोस् ।
दाँतमा दाग खैनी/सुर्ती र गुड्खाले लगाउँछ । यदि यि कुराहरु छोड्नु भयो भने दाँतमा दाग लाग्दैन ।
नरम तथा मध्यम स्तरको दागहरु Ultrasonic (दाँत सफा गर्ने मेसिन) बाट हटाउन सकिन्छ । कडा/गाह्रो, अप्ठ्यारो दागहरुलाई दाँत टल्काउने/चम्काउने विधि Bleaching गर्न जरुरी हुन्छ ।
दाँतको सफाई (Scaling of Teeth)
दाँतको सफाई सामान्य बिना शल्यक्रिया गर्ने उपचार हो । जसले संक्रमित दाँतमा जमेको कस/फोहोर र अन्य अड्केको खानेकुरा निकाल्ने गर्दछ ।
यो विधि अपनाउनलाई छुट्टै औजार चाहिन्छ जसले आशा गरे अनुसार काम गरोस् र विभिन्न संक्रमण वा नकारात्मक प्रभाव विरुद्ध सुरक्षित बनाओस् । मुख्यतया डेन्टिष्टहरुले अल्ट्रासोनिक ९ग्तिचबकयलष्अ० मेसिन प्रयोग गर्दछ ।
अल्ट्रासोनिक (Ultrasonic) मेसिनको टुप्पो राम्रो समथल (Smooth) हुन्छ र यसको तरंग छिटोछिटो हुने भएकोले जमेको फोहोर र दन्त लेउलाई सजिलै हटाउने छ । यो मेसिनको तरंगहरु उत्तम/सरल हुने भएकोले यसले दाँत र गिजालाई असर गर्दैन ।
दक्ष तथा अनुभवी डेन्टिष्टकोमा गई प्रत्येक ६ देखि १२ महिनाको फरकमा दाँतको सफाई गर्न सकिन्छ ।
यदि दाँतमा कडा/अप्ठ्यारो दागहरु भए दाँत टल्काउने विधि (Bleaching) गर्नुपर्दछ ।
दाँत टल्काउने विधि (Bleaching) को बारेमा केही तल प्रष्ट्याइएको छ ।
दाँत टल्काउने/सेतो बनाउने Bleaching of Teeth
Bleaching भनेको यस्तो विधि/प्रक्रिया हो जसले गाढा दाग/अप्ठ्यारो फोहोरहरुलाई निकाल्ने गर्दछ । जसमा विभिन्न प्रकारको Chemical िप्रयोग हुन्छ, जसमध्ये Carbamide Peroxide, Hydrogen Peroxide प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Power Bleach, Light Curing मेसिनको प्रयोगले दाँत टल्काउने प्रक्रियामा मद्दत गर्नेछ ।
Night Guard Bleaching गर्न तपाईलाई डेन्टिष्टले सल्लाह दिन सक्नेछ जसमा तपाईंले Bleaching Gel र Tray पाउनुहनेछ र रातभर Tray लाई मुखमा राख्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा तपाईंको दाँतमा चमक पाउनु हुनेछ ।
दाँत टल्काउने (Vital Bleaching) यो विधि सुरक्षित र प्रभावकारी हुने भएकोले यसले तपाईंको सौन्दर्यमा सहयोग पु¥याउने छ ।
चिया, कफी, चुरोट, जाँड, रक्सी, कलर लगाएको खानेकुरा जस्तो सोया सस, टमाटरको सस आदि खानेकुराहरुलाई ४८ घण्टा सम्म नखाँदा उत्तम हुनेछ । जसले गर्दा तपाईंको दाँतमा तत्काल दाग लाग्न दिंदैन ।
हामी सधैँ तपाईंको राम्रो स्वास्थ्य र सुन्दर मुस्कानको कामना गर्दछौं ।
लेखक: निमा गेल्बु शेर्पा (डेन्टल हाइजेनिष्ट)
कार्यरत: सञ्चालक, ह्याप्पीडेण्ट डेण्टल सर्भिस सेन्टर प्रा.लि.
बुढानिलकण्ठ–०७, हात्तिगौंडा, काठमाडौं ।
फोन नं.: ०१–४३७६०१६